Durango: Wild Lands 4.8.0+1908231726 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 4.8.0+1908231726 လြန္ခဲ့ေသာ2ပတ္က
ဂိမ္းမ်ား တကိုယ္ေတာ္ Durango: Wild Lands
Durango: Wild Lands ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
Durango ဂိမ်းဝေဖန်ဆုပေးပွဲမှာကျင်းပတဲ့ E3 ရဲ့ "အကောင်းဆုံးမိုဘိုင်း / Handheld" အမည်စာရင်းတင်သွင်းသည့်ဒိုင်နိုဆော MMO ဂိမ်းပါ!
Durango မိုဘိုင်းအပေါ်အပြည့်အဝ-featured MMOs ၏နောက်ဆင့်ကဲပါ! ဒါဟာပွင့်လင်းကမ္ဘာကြီး MMO ကိုသင်ဒိုင်နိုဆောနှငျ့ပွညျ့စုံတစ်ကျယ်ပြန့်, သမိုင်းမမြေယာကျင်လည်ကျက်ဖို့အပြည့်အဝလွတ်လပ်ခွင့်ကိုခံစားပေးနိုင်ပါတယ်။ ယင်းတောရိုင်းမြေမှတဆင့်စွန့်စားမှု, သင့်လမ်း play, စူးစမ်း, ယာဉ်နှင့်အသက်တာသစ်နှင့်ယဉ်ကျေးမှုဖောက်လုပ်။
ဒါဟာသမိုင်းမ MMO ဒိုင်နိုဆော၏လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်ပြည်သို့ကြာပါသည်။ ဒီ Jurassic စွန့်စားမှု, သင် Durango သို့သင့်ရဲ့ကမ္ဘာကြီးထဲကနေ warped ပါတယ်။ ထူးထူးဆန်းဆန်းဒီလောကပို့ဆောင်ကျြမှောကျခတျေပစ္စည်းများနှင့်အတူလက်ဆွဲကြွယ်ဝသမိုင်းမပတ်ဝန်းကျင်တွင်ရှာဖွေပါ။
ယဉ်ဒိုင်နိုဆော, ပြိုင်ဘက်မျိုးနွယ်စုများဆန့်ကျင်မော်ကွန်းတိုက်ပွဲများအတွက်စစ်တိုက်ခြင်းနှင့်သင့်သူချင်းရှေ့ဆောင်များနှင့်အတူသစ်တစ်ခုယဉ်ကျေးမှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်။ သင့်ရဲ့ရှင်သန်မှုအတွက်ကူညီရန်သင့်အားလှည့်ပတ်ခေတ်သစ်နှင့်ဒေသခံနှစ်ဦးစလုံးအရင်းအမြစ်များကိုအမဲလိုက်ခြင်းနှင့်စုသိမ်းမည်။ ကမ္ဘာကြီးကိုနှင့်အခြားကစားသမားများနှင့်အတူအပြန်အလှန်ရန်သင့်ကိုယ်ပိုင်လမ်းကြောင်းကိုရွေးချယ်ခြင်းအားဖြင့် Durango ၏ကျယ်ပြန့်ခြင်းနှင့်အန္တရာယ်သည်တောကိုပွုစုပြိုးထောနှင့်တဖြည်းဖြည်းတိုးတက်ပြောင်းလဲရန်သင့်အတွင်းစိတ်ရှေ့ဆောင် Explore နှင့်လက်ခံ! Durango အတွက်ဒိုင်နိုဆောနှင့်ပြည့်စုံ untamed တောရိုင်းမြေမှတဆင့်စွန့်စားမှု!
•မတူကွဲပြားသစ်ပင်ပန်းမန်များနှင့်မန်များနှင့်အတူ teeming ကြီးမြတ်ဒိုင်နိုဆော, ကြွယ်ဝသောပတ်ဝန်းကျင်နှင့်ကျွန်းများနှင့်ပြည့်စုံတစ်ကျယ်ပြန့်, သမိုင်းမပွင့်လင်းကမ္ဘာကြီး Explore
•ပြည်မှသင့်ရဲ့တစ်သိန်းနှင့်အရင်းအမြစ်များကို အသုံးပြု. သင်၏အအတွင်းစိတ်ရှေ့ဆောင်စွန့်စားမှုနှင့်လက်ခံ
အမျိုးမျိုးသောပတ်ဝန်းကျင်နှင့်ပိုပြီးအဖိုးတန်အကြောင်းအရာနှင့်• Discover မြှပ်နှံကျွန်းများ
• Explore နှင့်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ, ယဉ်များနှင့်လူထုအခြေပြုကျွန်းစုအခြေချ - စုအမဲလိုက်ခြင်း, ယာဉ်, ချက်ပြုတ်, လယ်ယာ, တညျဆောကျ, သင်၏ဒိုမိန်းနှင့်စွမ်းရည်တိုးချဲ့
•အဖိုးတန်အရင်းအမြစ်များ, tamable ဒိုင်နိုဆောများနှင့်လျှို့ဝှက်ချက်များနှင့်ပြည့်စုံတည်ငြိမ်ကျွန်းများ Explore
•ကစားသူအများအပြား features တွေသင်, တစ်ဦးနွယ်စုဖန်တီးအသင်းဖော်တွေနဲ့ညှိနှိုင်းခြင်းနှင့် sprawling ကျေးရွာပေါင်းဖန်တီးဖို့အတူတကွအလုပ်လုပ်ကြကုန်အံ့
•အတူအွန်လိုင်း Play နှင့်အခြားမျိုးနွယ်စုများဆန့်ကျင်ယှဉ်ပြိုင် - ဝင်ရောက်စီးနင်းကျွန်းများ၌ကြီးသောဒိုင်နိုဆောဆင်းလိုက်ရှာနှင့် PvP နှင့် Clan ရဲ့စစျပှဲတှငျပါဝငျ
•အစဉ်အဆက်-တိုးချဲ့တစ်ကမ္ဘာလုံးထိန်းချုပ်ရေးအတွက်ပိုကောင်းအရင်းအမြစ်များနှင့်စစ်တိုက်ရန်သူမျိုးနွယ်စုများစုဆောင်းရန်ဗေ့ခ်ျကျွန်းများ Explore နှင့်အောင်နိုင်
တစ်ဦးဒိုင်နိုဆော-ဖြည့် multiplayer ကမ္ဘာကြီး Enter - ယနေ့ Durango ကို download လုပ်ပါ!
Android OS6သို့မဟုတ်မြင့်မားသော / က Galaxy S7 သို့မဟုတ်ပိုမိုမြင့်မား: 1) အထူးအသေးစိတ်အကြံပြု
2) အနိမ့်အထူးအသေးစိတ်: Android ကို OS က 4.4 အထက် / Galaxy S5 ကိုသို့မဟုတ်ပိုမိုမြင့်မား
3) RAM ကို 2GB သို့မဟုတ်ပိုမိုမြင့်မား
ကျွန်တော်တို့ရဲ့အရာရှိတဦးက website နှင့် Facebook စာမျက်နှာပေါ်တွင်နောက်ဆုံးပေါ်သတင်းများ, အသုံးဝင်သောအကြံပေးချက်များနှင့်အဖြစ်အပျက်အချက်အလက်များကိုရှာဖွေလာကြ!
Facebook မှာ: http://www.facebook.com/PlayDurangoWL/
ပံ့ပိုးမှု & အဝန်း
သငျသညျပြဿနာများရှိခြင်းပါသလား? In-ဂိမ်း 1 ပံ့ပိုးမှုသို့မဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကိုမှာစုံစမ်းရေးကော်မရှင်ပေးပို့: ကျွန်တော်တို့ရဲ့ 1 ဆက်သွယ်ပါ
Service ၏စည်းမျဉ်းများ: http://m.nexon.com/terms/304
# စမတ်ဖုန်း Application ကိုခွင့်ပြုချက်များသတင်းအချက်အလက်
ကင်မရာ: ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုမေးမြန်းစုံစမ်းလိုသည်များနှင့်အတူကူညီပေးဖို့ screenshots များရိုက်ယူခြင်း
ဓါတ်ပုံများ: ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုများအတွက်ချိတ်ဆက်ခြင်း screenshots များ
> ကို Android 6.0 နှင့်အထက်: Setting> Apps ကပ> ခွင့်ပြုချက်များ> ခွင့်ပြုချက်စာရင်း> Accept / ပြန်ရုပ်သိမ်းခွင့်ပြုချက်ကို Select လုပ်ပါ
> ကို Android 6.0 အောက်တွင်: ခွင့်ပြုချက်ရုတ်သိမ်းဖို့ operating system ကို Upgrade, ဒါမှမဟုတ် app ကိုဖျက်ပြစ်လိုက်ပါ။
ဂိမ်းတစ်ခုချင်းစီကိုခွင့်ပြုချက်များအတွက်တစ်ဦးချင်းစီသဘောတူညီခကျြကိုဆက်ကပ်မပါဘူးဆိုရင်※, သငျသညျအထကျလမ်းညွန်အောက်ပါခြင်းဖြင့် installation ကိုအပြီးခွင့်ပြုချက်ပြန်ရုပ်သိမ်းနိုင်ပါတယ်။
Durango: Wild Lands အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
Durango: Wild Lands အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
Durango: Wild Lands အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
Durango: Wild Lands အား အခ်က္ျပပါ
Durango: Wild Lands ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း Durango: Wild Lands အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 4.8.0+1908231726
လက်မှတ် SHA1: F5:B4:CC:89:4B:57:CA:94:2D:D0:3B:85:87:6A:17:F5:6D:C9:3A:78
Durango: Wild Lands APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ